joice mujuru on News24
ARTICLES RELATING TO JOICE MUJURU
Zimbabwean former deputy president Joice Mujuru's troubles are reportedly worsening after senior members of her National People's Party resigned and joined the country's main opposition, the MDC party.
Zimbabwe's chief justice Luke Malaba has been "heckled and booed" by opposition party lawmakers, and world leaders have bed final farewell to UN's Kofi Annan at Ghana state funeral.
Zimbabwean police say they have received fewer reports of election-related violence ahead of the July 30 poll than in previous campaigns.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has reportedly promised to stick to his pledge for a peaceful election, but has also said that his party would not take lightly to provocation by opposition parties.
Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa, was reportedly forced to register the Movement for Democratic Change Alliance as a fully-fledged political party pending a court outcome over the use of names and logos by a splinter group.
A Zimbabwe woman got married in hospital this weekend - days after her arm was bitten off in a crocodile attack and EFF leader Julius Malema is among five south Africans who have been sworn into the Pan African Parliament.
The Zimbabwean government has reportedly warned its citizens not to use cannabis for recreational purposes after it legalised its production specifically for medicinal and industrial purposes.
Zimbabwe’s MDC party has slammed a new 2% tax on electronic transactions, which it says is meant to "pick-pocket the poor", and Melania Trump has visited a former slave trading fort in Ghana.
A Zimbabwean political party which was said to be backed by ousted president Robert Mugabe has reportedly been disbanded, with its leaders saying they are now rejoining the ruling Zanu-PF party.
Zimbabwean former deputy president Joice Mujuru's NPP is reportedly on the verge of collapse as a number of senior party leaders have resigned after the party failed to impress in the just ended polls.
Mujuru says the coalition and the MDC have failed to agree on at least four cardinal issues that include the modalities of choosing the proposed coalition's leader, logos and symbols.